အစပ်ကြိုက်သူများအတွက် ချက်ရလွယ်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ ချက်ရတာကအရမ်းလွယ်ပြီး စားလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ရခိုင်ငရုတ်သီးချက်လေးပါ (ရေးနေရင်းတောင် ချက်ချင်းစားချင်လာပြီ)။
အစပ်ကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေ စမ်းချက်စားကြည့်ကြပါ။ ရှုးရှုးရှဲရှဲနဲ့ ခံတွင်းမြိန်တဲ့ ငရုတ်သီးချက်လေးပါ။ စားပြီးပူစပ်နေရင်တော့ မရွှေမိကိုအပြစ်မတင်ကြနဲ့နော်။ 😛
မြသန်းတင့်- ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၇)	မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၈)
1. BLOG ကိုးကွယ်သူလား | Thet Nandar Family | July 3, 2014 at 11:28 pm
2. yuki | October 5, 2010 at 10:38 pm
3. waddy | June 19, 2010 at 10:27 am
4. NNA | May 7, 2010 at 5:57 pm
5. mashwemi | May 7, 2010 at 6:34 pm
သိတော့ဘူး မကြီး ..သာမီးလဲ မပြောတတ်တော့ဘူးဗျ:P မရရင် ရတဲ့နေရာကနေမန့် ဗျာ …ရှုပ်တယ် 😛
6. MrDBA | May 5, 2010 at 11:21 pm
7. လူပျိုကြီး | May 5, 2010 at 9:07 pm
ဖတ်ကြည့်တာနဲ့ကို တော်တော်စပ်နေပါပြီ အဲဒီ့ဟင်းတော့ ချက်မစားရဲ့ဘူး 😛